Farmaajo oo la kulmay qaar ka mid ah madaxda warbaahinta Muqdisho - Jowhar somali news leader
Farmaajo oo la kulmay qaar ka mid ah madaxda warbaahinta Muqdisho
By Mahad	 Last updated May 4, 2021
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan xalay waqi dambe soo idlaaday la qaatay.
Madaxda Warbaahinta waxaana lagu soo beegay 3-da May oo ah maalinta loo gooni yeelay Maalinta Xorriyadda Saxaafadda Adduunka.
Imaaraadku waxa uu saxeexay heshiis oo ay ku iibsanayaan 80…
Wiil iyo gabar walaalo ah oo caawa lagu diley magaalada…
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu kulankan ka sheegay in uu dhici karo qaladaad lana soo bandhigi karo balse waxa uu dalbaday in haddii Dowladda wax ka qaldamo la weydiiyo oo fursad loo siiyo in la weydiinayo sababta ay wax u qaladay.
“Waxa aan aaminsanahay in uu jiro koboc, maalin waliba wax baa la baranayaa sida aad sheegteen oo aad qirteen in isbadal badan uu ku dhacay xiriirka aad la leedihiin Dowladda ay ka wanaagsan tahay sidii hore oo marba marka ka dambeyso la arkayo horumar, wax waliba ma dhici karto in maalin la sameeyo” Sidaasi waxaa yiri Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
“Sidaas oo ay tahay qaladaad waa la geli, marka idinku naftiisa in aad madaxiina ku heysaan Dowladda idinkaa iska leh, Dowladdu cadow idin ma aha, haddii ay wax qaladana waad sheegi kartaan idinkoo siinaya fursad sababta ay u qaladay aad weydiisaan” Ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Taliyaha Ciidanka Booliska General Xijaar oo amar soo saaray
Jeffrey Feltman oo booqasho ku tegeya Geeska Africa
Scientists explore the role of immunosuppressed people in generating Covid-19…
French coach says he ‘fought back’ against judo champion…
Austria appoints new chancellor after Kurz’s surprising…
Private transportation giant Didi exits the New York Stock Exchange,…
The ‘agricultural mafia’ takes over Brazil’s Amazon…
F1’s Hamilton not ‘comfortable’ racing in Jeddah as…
‘Rice jihad’: the video falsely accusing Muslims of…
Alec Baldwin says he’s not responsible for fatal on-set shooting
32,098Likes Like our page